झापाका सुश्रुत बने सहिद रत्नकुमार राष्ट्रिय बुद्धिचालको च्याम्पियन - Radio Simrik || 96.5 Mhz
झापाका सुश्रुत बने सहिद रत्नकुमार राष्ट्रिय बुद्धिचालको च्याम्पियन
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ०९, २०७५ समय: १९:५७:३७
मोरङ । फ्रेण्डसीप चेस क्लवद्वारा आयोजित मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा भएको ‘सहिद रत्नकुमार वान्तावा प्रथम राष्ट्रिय खुल्ला फिडे रेटिङ बुद्धिचाल प्रतियोगिता—२०७५’को उपाधि झापाका सुश्रुत दाहालले हाता पारेका छन् ।
बुधबार भएको फाइनल राउण्डमा क्यान्डिडेट मास्टर (सी.एम.) कृष्ण थापासँग बराबरी खेल्दै प्रतियोगिताको उपाधि हाता पारेको हो । दाहालले ७.५ अंक ल्याएका थिए । उपाधि विजयसँगै दाहालले आफूलाई बुद्धिचालमा युवा खेलाडिको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यसैगरी ७.५ अंक ल्याएर दमक झापाकै प्रकाश नेपाल दोस्रो भएका छन् । प्रोगेशिप पइन्टको आधारमा नजिता प्रकाशन गरिएको हो । फाइनल राउण्डमा नेपालले फिडे मास्टर (एफ.एम.) रिजेन्द्रराज भण्डारीलाई हराएका थिए । कृष्ण थापा ७ अंक ल्याएर तेस्रो पुस्कार जितेका छन् ।
बद्रीलाल नेपाली, सुमन लामा, सुरवीर लामा, राजेन्द्र राईले समान ७ अंक ल्याएर प्रोगेसिप पइन्टको आधारमा क्रमस चौथो, पाँचौ, छैठौ र सातौ पुरस्कार जितेका छन् ।
प्रतियोगिताको प्रथम, दोस्रो र तेस्रोहुने खेलाडिलाई जनही ५०, ४०, ३० नगद, ट्रफी र प्रमानपत्र प्रदान गरिएको थियो । सातौदेखि १५ औं हुने खेलाडिलाई १३ देखि सात हजार नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
उमेरको हिसावले १२, १४ र १६ बर्ष मुनिका खेलाडिहरु क्रमस सुजन थापा, प्रज्वल बस्नेत र मिशन दाहालले पनि नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । देशभरबाट १३५ खेलाडि सहभागि प्रतियोगितामा ३९ जनालाई तीन लाख ४० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको आयोजक फ्रेण्डसीप चेस क्लवका कार्यक्रम संयोजक अर्जुन जम्नेली राईले बताए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन माघ ५ गते प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका थिए भने समापन ९(आज) गते कार्यक्रममा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख दिलिपकुमार राईको हातबाट वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य चण्डीप्रसाद राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । खेल खेलाउन आर्विटर(एम्पाएर) ज्ञानेन्द्र खाइजु, विजय थापा लगायतल आएका थिए ।